५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ? – सुष्मा कार्की
Homeमनोरञ्जन५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ? – सुष्मा कार्की
January 5, 2019 Spnews मनोरञ्जन, रोचक / विचित्र Comments Off on ५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ? – सुष्मा कार्की
काठमाडौं । नेपाली कलाकारहरुको कमाइको स्रोत अचेल फेरिएको छ । ‘डायस्फोरा सोसाइटी’ उनीहरुले कमाउने प्रभावकारी बजार हो ।
गायक–गायिका र कमेडीयनहरुलाई फलिफाप बनेको विदेशी बजार फिल्मकर्मीहरुका लागि पनि उपयुक्त देखिएको छ । अधिकांश नेपाली नायिकाहरु भने विदेश गएर ‘डान्स पर्फमेन्स’ देखाएर राम्रो आम्दानी गर्ने चलन छ ।
यसरी कमाउनेमा प्रियंका कार्की, नम्रता श्रेष्ठ, रेखा थापालगायतका नायिकाहरुको नाम अगाडि आउँछ । विदेशमा रहेका आयोजकहरुले यीनै नायिकाहरुलाई कार्यक्रममा बढी निम्तो दिने गरेका छन् । हरेक महिना जस्तै विदेश जाने उनीहरुले आम्दानी पनि राम्रै गर्छन् । त्यसो त नेपालमै पनि राम्रो कमाउने चल्तीका नायिका मानिन्छन् उनीहरु ।
अन्य नायिकाहरु भने विदेशमा रहेका कार्यक्रम आयोजकहरुको नजरमा झट्ट पर्दैनन् । बोलाउनै परे पनि केही थोरै ‘रेट’ मा बोलाउने गर्छन् । कार्यक्रममा दर्शकको टीकटबाट उठेको रकमको केही प्रतिशत मात्रै दिने हुँदा एउटा देश जाँदा एक नायिकाले ५ लाख हाराहारीमा कमाउन सक्छिन् ।
रोचक त के भने, नेपालभित्रै फिल्मका प्रोजेक्ट कसले बढी पाउने भन्नेमा प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो भने अहिले विदेशमा कसले बढी प्रोग्राम पाउने भन्नेमा प्रतिष्पर्धा चल्छ । यस्तो प्रतिष्पर्धामा धेरै पछाडि छिन् सुष्मा कार्की । विदेशमा थोरै प्रोग्राम पाउने कलाकार हुन् उनी । तर सुष्माले भने ५ मिनेट मात्रै डान्स गरेको ३ लाख ‘रेट’ रहेको बताएकी छिन् । हालै उनले दिएको एक भिडियो अन्तरवार्ताको क्रममा यस्तो दावी गरेकी हुन् ।
तर सुष्माले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति फिल्मकर्मीमाझ अनौठो गस्सिप बनेको छ । विवादमा आउन रुचाउने सुष्माले नयाँ काम नै नपाइरहेको बेला ५ मिनेट डान्स गरेको ३ लाख पारिश्रमिक लिने बताएको कुरा हास्यास्पद भएको भन्दै अरु फिल्मी कलाकारहरुले ‘गस्सिप’ बनाएका छन् ।
फिल्मका प्रोजेक्ट नपाएपछि फेसवुकमा फोटो राखेरै पनि आफ्नो प्रचार गर्ने सुष्माले कुन प्रोग्राममा ३ लाख पारिश्रमिक पाइन् होला भनी अरु थुप्रै अभिनेत्रीहरु समेत दंग परेका छन् ।
५ मिनेटको ३ लाख ! कोही छ तिर्न सक्ने ? - सुष्मा कार्की
यो हप्ता तपाईको कसरि बित्नेछ ? भेटि स्वरूप शेयर गरि साप्ताहिक राशिफल पढ्नुस
पाथिभरा माताको दर्शन गरी पुष २१ गते देखि २७ गतेसम्मको राशिफल पढौ, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं